iPhone na Flickr: N'ime foto 15,000 na ibili | Martech Zone
iPhone na Flickr: N'ime foto 15,000 ma na-ebili
Satọde, 30 Juun 2007 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
Site na mkpuchi iPhone niile (anaghị m enweta otu), echere m na ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ọrụ na Flickr na ọtụtụ ndị na-etinye foto ma ọ bụ banyere iPhone ma ọ bụ iPhone ha. O juru m anya ịhụ foto 15,000 na nso nso a nke iPhone gwa na Flickr!
Maka ndị na-agụ RSS m, pịa site na post iji lee ihe ngosi mmịfe:
Ndi otu ahia Apple kwesiri inwe ego na nke a!
Douglas Karr Saturday, June 30, 2007 Sunday, August 23, 2009
Njikwa ngwaahịa: ịgbachi nkịtị bụ ihe ịga nke ọma nke na-agabeghị akwụghachi ụgwọ
Amazon Associates Central Sucks dị njọ dị ka Commission ahụ
Jul 1, 2007 na 9: 28 AM
Enweghị m mmasị na iPhone. Ma ọ dịghị, mana (maka ebe m bi - maka opekata mpe ọnwa 6-9 ọzọ)…
Jul 1, 2007 na 10: 43 AM
Echere m na Apple kachasị mma na iji ndị mmadụ azụ ahịa. Ebe otutu ulo oru na etinye uche ha na imeputa ihe na nloghachi na ulo ahia, Apple tinyere uche na 'di nma'. Ha na-elekwasị anya na 'chọrọ' vs. 'mkpa', megidere iwu.
Nke ahụ kwuru, Apple nwere ogologo oge nke ịme ihe 'ọrụ' na nke mbụ ya na ịme ihe ọhụrụ na ngwaahịa ha. Enwere m kpoo ọchị na igwe Apple ezi a bit.
N'ileghachi anya azụ, ọ bụ ezie na… Enwere m AppleTV (nke m na-ele dị ka TV mgbe niile), MacBookPro, na G3 (enyemaka chọrọ) na G4 (chọrọ enyemaka). Afọ abụọ gara aga, enweghị m ihe ọ bụla Apple!
Anaghị m eme atụmatụ na-iPhone ọ bụla oge adịghị anya. Ọ bụ naanị okomoko nke m na-agaghị akwụli ugbu a. Ugbu a… ọ bụrụ na onye m na-arụrụ ọrụ chọrọ ịgbanwe ihe…. 🙂
Jul 1, 2007 na 4:10 PM
? na ihe dị egwu (nke ka na-eri m ọtụtụ afọ na kọmputa) bụ na iPhone nwere ike nhazi karịa G3. (Ikwu okwu banyere, olee otu i si jide aka na G3 afọ abụọ gara aga?)
M ga-achọ mgbawa na Apple karịrị “jụụ”. Ee, ha na-eme ngwa dị jụụ, mana isi m bụ "ọ na-arụ ọrụ". Ha anaghị adakọ dịka PC dị, mana n'aka nke ya ị nwetara ihe na-arụ ọrụ na igbe ahụ. Won't gaghị enweta ọtụtụ ọnwa ị nwere ike tweak. Ma eleghị anya, mmadụ nwere ike ịsị: Microsoft kwenyere na ịhapụ onye ọrụ ya nwere ọtụtụ nhọrọ. Apple kwenyere na ọtụtụ ndị ọrụ maara obere ihe banyere ndụ dị n'ime kọmputa, yabụ ndị injinia Apple na-emere gị nhọrọ.
Maka ọrụ ụfọdụ Mac dị mma, maka ndị ọzọ ọ bụ PC. Ọ dabara nke ọma, ahịrị ndị ahụ adịzịghị ọcha n'oge.
Abụọ KIA na Mercedes ga - esite na A ruo B. Ọ dị mma karịa na nke ọzọ…
Jul 2, 2007 na 8: 15 AM
Ọma tinye! (Enwetara m G3 na G4 n'oge na-adịbeghị anya) )
Jul 2, 2007 na 5: 20 AM
Ee, Apple na-eme ka ihe “dị jụụ” ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe atụ maka IBM / Lenovo Thinkpads, nke “na - arụ ọrụ” na “ọrụ” dị iche na “mma”
Jul 2, 2007 na 6: 52 AM
? nke ozo dabere na akara oru gi 😉
(Echere m na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mkpọsa Apple na-egwu na…)
Jul 2, 2007 na 8: 20 AM
Enwere m Thinkpad obere oge gara aga ma ọ dị egwu. Ọ bụ brik, mana enwere m 3 Operating Systems na ya (Windows 2000, Win 98, na OS / 2). Ncheta dị ụtọ. Enwere m MacBookPro ugbu a ọ bụ laptọọpụ kachasị mma m nwetagoro - n'agbanyeghị na enwere m nkụda mmụọ itinye ya na ụlọ ahịa ụbọchị ole na ole. (Apple gbanwere ya ngwa ngwa - ọ masịrị m).
Jul 5, 2007 na 4:43 PM
onye! nke ahu bu otutu foto O_O